Ya bụ nukwu ígwè na-enye ọkụ ahụ bụ nke a rụpụtara site n'aka ụlọ ọrụ 'JOCARO Nig. Ltd.', ma bụrụkwa nke íké ya dị KV iri abụọ.
N'okwu ya na mmemme inyefè nnukwu ígwè ọkụ ahụ n'aka ndị ọlụsị, bụ nke weere ọnọdụ n'ogige Ọkammụta Dọra Akụnyịlị 'Women Development Centre' dị n'Awka bụ isi obodo steeti Anambra; ya bụ nwa amadi ọrụ obi ebere na-echu ụra, ma bụrụkwa onyeisi ụlọ ọrụ JOCARO Nig. Ltd. kọwara na ihe kpaliri ya o jiri nye onyinye afọ òfùfò ahụ bụ iji mee ka ihe dịrị ndị ọlụsị nọ n'ogige ahụ amụ ọrụ mfe ma hụkwa na ha na-enwe ọkụ oge niile ha chọrọ, iji wee nyere ha aka n'ihe dị iche iche ha na-eme n'ogige ahụ.
Mmadụ obiọma ahụ, bụkwa onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ APGA apụta ịzọ ọkwa nnọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Agụata n'ụlọ ọgbakọ nnọchi anya ala anyị, n'okwu ya, gakwara n'ihu kọọ nkenke akụkọ bànyere etu o siri bàta n'ogige ahụ otu mgbe, bụ ebe a na-akụziri ndị ọlụsị ka e si eme dị iche iche, e wee wèré ọkụ n'ike, nke mezịrị ka ọchịchịrị na ọsụsọ juputa ebe niile n'ihi na ndị ahụ enweghị ígwè na-enye ọkụ ebe ahụ, ya wee kwe ha nkwà ibunye ha ótù n'efu, bụkwazị nke ọ bịara imezuru ha ụbọchị ahụ.
N'okwu nke ya, nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nye aka na-achị steeti ahụ n'ihe gbasaara ọlụsị, bụ maazị Chuks Ezewuzie, onye obi ya juputakwara n'ọñụ kọwara nke ahụ dịka nke magburu onwe ya nakwa nke kwesiri òtùtó n'ihi na e too onye hụrụ ewu, ọ hụ ehi, o gbuo. Ọ gara n'ihu kọwaa ụdịrị ótító òtù ahụ bụ 'Disability And Humanitarian Services Centre' gabigagoro kemgbe e jiri hibe ya n'ahọ 2016 site n'aka osote nwunye aka na-achị steeti ahụ bụ oriakụ Ebelechukwu Obianọ wee ruo ụbọchị taa. O toro ya bụ nwoke obiọma banyere afọ ọma ya, ma kpọkuokwa ndị ọzọ bụ ndị aka ji akụ n'ala anyị ka ha ñomie ụdị akparamagwa ahụ dị etu ahụ, site n'icheta ndị o nweghị ka ọ ra ha, ndị ọlụsị na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ.
Na ntụnye nke ya, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ọdịmma na ihe metụtara ndị nne na ụmụ ntàkịrị, bụ oriakụ Ndidi Mezue kelere ya bụ agụ nwoke maka obiọma ya na ụlọ ọrụ JOCARO Nig. Ltd. O tokwara aka na-achị steeti ahụ, bụ gọvanọ Willie Obianọ maka ọrụ ọma ya banyere ndị ọlụsị na steeti ahụ, ọ kachasị site n'ịkpọlite ọtụtụ n'ime ha n'ọkwa ọrụ dị iche iche na steeti ahụ, bụ nke megoro ka ndị mmadụ were ha ghọta na ndị ụlọsị nwere ike n'ezie.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere ode akwụkwọ ọkpụtọrọkpụ na Minịstịrị na-ahụ maka ọdịmma na ihe metụtara ndị nne na ụmụ ntakịrị, bụ Dọkịta Azụka Ọfọmata; onyemaka pụrụ iche nye gọvanọ steeti ahụ n'ihe gbasaara iji ụñàrà (sign) agwa ndị ọlụsị okwu, bụ maazị Joseph Collins, tinyere ọtụtụ ndị ọzọ.